Sarah iyo Todd Palin waxay u muuqdaan inay madax furayaan - dadka - WAA LA DILAY
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE Sarah iyo Todd Palin waxay umuuqdaan inay madax furayaan - dadka
Sarah iyo Todd Palin waxay umuuqdaan inay madax furayaan - dadka
Madaxweyne ku xigeenkii hore Sarah Palin iyo ninkeeda Todd ayaa u muuqda kuwa qarka u saaran furiin.
The News Anchorage Daily News
kii hore ee asalka Alaska hore, wuxuu ku baaqayaa is casilaad kadib guurkii 31 sano. ayaa la soo weriyey Isniinta, in kasta oo kala-qaybsanaanta muuqata loo maareeyay qaab sir ah. Todd Palin, ama ugu yaraan qof leh qoraalkiisa, wuxuu weydiistay furriinka Sarah Palin Jimcihii, ama qof la socda bilowgeeda, sida lagu sheegay daabacaadda.
Ma jiro magac dhammaystiran - oo keliya uun bilow - loo adeegsaday dukumiintiyada maxkamadda. Laakiin TP iyo SP waxay leeyihiin taariikh isku mid ah oo ay guursadaan Palins iyo cunuggooda yar oo keliya waxay leeyihiin isla taariikh dhalasho oo la mid ah Trig, wiilkii 11 sano ee Palins.
Kiiska maxkamadda TP wuxuu codsanayaa in si wada jir ah loo ilaaliyo wiilkooda. Qofkani wuxuu ku baaqayay "is-xakameyn la'aanta dabeecadda ee u dhexeeya labada dhinac, sidaa darteedna ay kuwada noolaan kari waayeen sidii nin iyo naagba" oo ah sabab la doonayo in lagu kala tago guurka.
Marka, yaa hela guriga aragtida guud ee Ruushka? 19659002] Palins, labadaba da 'ahaan 55, waxay leeyihiin afar carruur ah oo kale - Track, 30 sano jir; Bristol, 28 sano; Willow, 25 sano jir; iyo Piper, 18 sano jir.
Sarah Palin waxay ahayd qof qaraabo ah oo aan lagaranaynin meel ka baxsan Alaska 2008 markii ay noqotay lama filaan doorashada murashaxa madaxweynaha jamhuuriga John McCain inuu noqdo madaxweyne kuxigeenka. Waxay noqotay murashaxii ugu horreeyay ee u tartamaya gudoomiye ku xigeenka GOP.
Tikidka McCain-Palin wuxuu lumiyay doorashadii xisbiga Dimoqraadiga Barack Obama iyo kii labaad, Joe Biden.
Palin wuxuu ku guuleystay xukunka Alaska ee 2004. Guul darrooyinkeedii kadib, waa laga adkaaday. wuxuu iska casilay xilkiisii ​​dowladnimo ee 2009 ka hor dhamaadka muddadiisa.
Waxay tan iyo markaas ku sii wadday astaanteeda qaran iyada oo u sii marineysa buugaag, shirarka iyo joogitaanka warbaahinta bulshada.
. qareen wakiil ka ah TP. Waxay ku xereysey xereyn in ay weydiisaneyso maxkamada in ay si qarsoodi ah ula dhaqanto furiinka.
Ma jeclayd sheekadan? Read faallo badan oo ku saabsan madadaalada Cicero Estrella halkan oo raadso wararka kale ee ku saabsan dadka caanka ah .
Amiir William: "William miyuu doonayaa inuu boqor noqdo?" Sidee buu William ku dhacay boqoradda
Amiir Harry wuxuu la jaray boqoradda si uu wax u qabsado. sheegashada khubarada boqortooyada - & # 039; Doorka ayaa la beddelay & # 039;